भाकल के हो ? के भाकल गरेपछि बुझाउनै पर्छ ? नबुझाउँदा के हुन्छ ? – Sapana Sanjal
June 26, 2021 227
Sapana Sanjal : पहिले आउँ भाकल भनेको के हो भन्ने उत्तर तर्फ भाकल भनेको हामीले कुनै पनि देवीदेवता सँग गरिने भाका हो । एक किसिमले भनौभने भाकल भनेको भाका नै हो । भाकल गर्ने व्यक्तिले केही पाउँ, कुनै व्यापार व्यवसाय गर्दा राम्रो होस, बिरामी हुँदा ठीक होस वा कसै सँग टाढा बसौं भनी आफ्नो ईच्छा अनी आफुले छनौट गरी त्यसो पुरा गरेमा म यो दिन्छु वा यसो गर्छू वा कुनै कुराको बली दिन्छु अथवा भेटी पैसा नै चढाउँछु भनी कुनै मन्दीरमा या आफ्नो मन मनै गरिने भाका हो ।
धर्मशास्त्रमा भनिएको छ कुनै मानिसले देवीदेवताको निम्ती भाकल गर्छ भने त्यो भाकल कहिले पनि भंग गर्न हुदैन । जसको मन बाट जुन कुरा निस्कीएको छ त्यो कुरा पुरा गर्नै पर्दछ । भाकल जुन समयमा बुझाउँछु भनेको छ सो समयमा बुझाउनै पर्दछ नत्र देवीदेवता त्यो व्यक्तिसँग प्रसन्न कहिले पनि हुँदैनन् भन्ने हाम्रो धर्मशास्त्रमा उल्लेख छ ।
हो यदी कसैले कुनै कुरा मागी भाकल गर्दछ यसो गरी दिए यति समयमा यस्तो गर्छु भन्ने भाका गर्दछ भने त्यो अवश्य पुर्याउनु पर्दछ । यसको बैज्ञानीक कारण यस्तो छः यदी कसैले भाकल गरे अथवा कुनै कुरा गर्छु भनी भाका गर्दछ त्यो समयमा त्यसले आफुले बोलेको भाका पुरा गर्न सकेन भने उसको शरिरमा भएको आज्ञा चक्रले काम नगरेको भन्ने बुझिन्छ अथवा उ कुनै पनि कुराको निर्णय लिन नसक्ने मान्छे भन्ने बुझिन्छ । उसले कुनै पनि कुरामा अडिक रहन सक्दैन ।
यदी कसैले भाकल बोलेर पुरा गर्दैन भने उसको भाग्य नै बिग्रिएर जान्छ किनकी हाम्रो जिवनको सात चक्र मध्ये सबै भन्दा महत्वपूर्ण चक्र भनेको आज्ञा चक्र हो । आज्ञा चक्र भनेको हाम्रो सात चक्र मध्येको राजा चक्र हो । जसको आज्ञा चक्रै बिग्रन्छ उसले जिवनमा कहिले पनि उन्नती प्रगती गर्न सक्दैन । त्यसैले आफ्नो आज्ञा चक्र बलियो बनाउने वा कमजोर बनाउने आफ्नै भित्र भएको कुरा हो । त्यसैले आफ्नो आज्ञा चक्र बलियो बनाउनु छ भने आफुले बोलेको भाकल समयमै पुरा गर्नु पर्दछ ।
नबुझाएमा के हुन्छ त?
यही आज्ञा चक्र कमजोर भएपछि मानिसहरु धेरै कुरा सोच्न थाल्दछ आफुले गरेका कामहरु बिग्रिन थालेपछि उसले आफुले गरेको भाकलहरु सम्झन थाल्दछ र यसो हुँदा उसले भाकल बोलेको देवीदेवता सम्झन थाल्दछ । धरै सोच्दा सोच्दै उसले आफ्नो सपनामा देवी देवताहरु देख्न थाल्दछ र देवी देवताले आफ्नो कामहरु रोके भनी देवी देवतालाई नै गाली गर्न थाल्दछ ।
त्यसैले आफुले बोलेको भाकल समयमै पुरा गरी आफ्नो आज्ञा चक्रलाई कमजोर हुन नदिऔं । यहीमै आप्mनो हित हुनेछ । !जय श्री राम !
Prevसंसारकै सबैभन्दा खुसी र विकसित देश कसरी बन्यो भूटान, तर किन बनेनन् नेपाल
Nextउडानको तयारीमा एयरलाइन्स, भोलि देखि टिकट बुकिङ पनि शुरु